Shirkada Golis Telecom oo ka warbixisay Deegaano Horleh oo ay Gaartay iyo Adeegyo ay soo kordhisay+Sawiro – SBC
Shirkada Golis Telecom oo ka warbixisay Deegaano Horleh oo ay Gaartay iyo Adeegyo ay soo kordhisay+Sawiro
Posted by Webmaster on Noofember 17, 2012 Comments
Shir jaraaid oo uu Maanta Xafiiskiisa Boosaaso ku qabtay Mareeyaha Guud ee SHirkada Golis Telecom Cali Xaaji Warsame ayaa waxaa uu kaga warbixiyay Casriyeyn lagu sameeyay qaar ka mid ah Adeegyada Shirkada Golis iyo deegaano kale oo hor leh oo laga hirgeliyay Adeegyada shirkada oo ay ku jirto Degmada Qandala ee Gobolka Bari.
Waxa uu maareeyaha Shirkada Golis shirkiisa Jaraaid ku sheegay in Adeegyada Shirkada ay bixiso ay yihin kuwo Damaanad leh si gaar ah Adeega Lacagaha lagu Dirsado ee Sahal oo uu shegay in lagu kordhiyay Servero iyo Qalabkale oo Saacidaya inaan Hakad ku imaanin.
Shirka Jaraaid Sidoo kale waxaa ka hadlay Madaxa suuqgeynta Shirkada Golis Telecom Soomaaliya C/raxmaan C/laahi Jaamac (Dayax) oo Si aad ah ugu nuuxnuuxday Adeegyada Muhiimada leh ee ay shirkadu bixiso siiba Adeegyada GPRS, Kunaso iyo Kuwo Kaleba isagoona sheegay in ay yihiin Fursado ay shirkada u soo kordhisay macaamiisheeda.
Waxa uu sheegay Dayax in la waasiciyay oo waxweyn laga bedelay Habraacyada Adeega waxlagu kala iibsado ee Sahal, in loo suurto geliyay Macaamiisha in ay ku gadan karaan Barnaamijyada iyo Ajndayada xadiga ay awoodaan sida 10Sent oo keliya taas oo u fududeyneysa in ay ku shubtaan mobilkooda, iskuna wicikaran.
Shirkada Isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya oo ah shirkad Sii balaarineysa Adeegyadeeda iyadoo ka jawaabeysa Baahida ay shacabka u qabaan Shirkada ayaa waxaa Numbarada Shirkada oo horey Lix number uga koobnaa waxaa lagu kordhiyay hal Number iyadoo iminka uu noqonayo lambarada shirkada 7 Number, waxayna tani aheyd mid shacabka loogu sheegayo in Lambaradooda uu ka hormari doono Hal Lambar oo sida ay shaaciyeen ah 7 (TOdobo).
Shirkan Jaraa’id ee uu Maanta Qabtay Maareeyaha Guud ee Shirkada Golis ayaa ah mid ay ku so bandhigeysay Horumarin Balaaran oo lagu sameeyay Adeegyada Macaamiisha ka isticmaalaan
Shirkada Golis Waa Shirkada Ugu balaaran ee Isgaarisiineed ee ka shaqeysa Deegaanada Puntland waxaana Adeegyadeeda laga Isticmaalaan Miyi iyo magaalo.
Ibraahim Maxud Yuusuf